Maxaa laga filan karaa Shirka ka furmaya Muqdisho? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaa laga filan karaa Shirka ka furmaya Muqdisho?
Waa shir dib loogu eegayo waxyaabihii ka qabsoomay heshiiskii doorashadda 27-kii May madaxa ay Muqdisho ku kala saxiixdeen.
MUQDISHO, Soomaaliya - Inkastoo aan jirin kala feker duwanaasho, haddana waxaa Shirka berri furmaya ku geedaaman arrimaha badan, oo sababi kara dib u dhac kale oo ku yimaada doorashadda.
Shirkan oo dib u eegis lagu sameynayo waxyaabihii ka qabsoomay heshiiskii doorashadda ee bil kahor ay hogaamiyeyaasha ku saxiixdeen Muqdisho iyo caqabadaha taagan, oo ay adag tahay in mudo gaaban lagu dhameeyo.
Waxaa Muqdisho ku sugan Lafta-Gareen, Axmed Madoobe iyo Deni, iyadoo la sugayo Guudlaawe oo Turkiga safar ugu maqan iyo Qoor-Qoor, iyadoo gogosha shirka la filayay in Maanta oo sabti ah la fidiyo, oo wadahadallada furmaan.
RW Rooble ayaa ku qabsanaaday inuu shir isagu yeero kadib markii ay ku adkaatay inuu caqabadihii taagnaa ku xaliyo 30-kii maalmood ee lasoo dhaafay, kuwaasoo ay ugu horeyso arinta Gedo oo ah xudunta khilaafka doorashadda Soomaaliya.
Gedo waxaa lagu heshiiyay in dib u heshiisiin laga sameeyo, oo maalmo loo dhiso kaasoo uu Axmed Madoobe magacaabistiisa leeyahay, waxaana arintan ku fadhiya Farmaajo oo beeshiisa diidan in Kismaayo looga taliyo.
Maalmaha shirka uu socdo, Rooble ayaa kala tashan doono Madaxda Maamullada sida laga yeelayo arrimaha taagan iyo waqtiga sii dhamaaya ee ka haray 30-ka maalin in doorasho lagu qabto, taasoo u waydiisan doono in waqti dheeri ah loogu daro.